”Xanuunka Jarmanka waannu dareennay!” – Turbiinnadii riixayey gaaska Ruushka oo lasoo fasaxayo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Xanuunka Jarmanka waannu dareennay!” – Turbiinnadii riixayey gaaska Ruushka oo lasoo fasaxayo
”Xanuunka Jarmanka waannu dareennay!” – Turbiinnadii riixayey gaaska Ruushka oo lasoo fasaxayo
(Hadalsame) 22 Juun 2022 – Ottawa waxay sahminaysaa habab lagu soo celiyo qaybo muhiim ah oo ka mid ah dhuumaha Nord Stream ee Russia gaar ahaan marawaxadihii halkaa yaalley, kuwaas oo hadda ku xayiran Canada cunaqabataynta Galbeedka darteed, Bloomberg ayaa sidaa Talaadadii werisay iyagoo soo xiganaya Wasiirka Khayraadka Dabiiciga ah ee Canada, Jonathan Wilkinson.
“Waxaan doonaynaa inaan ixtiraamno cunaqabataynta sababtoo ah cunaqabataynta waxaa Ruushka loo saaray sabab. Anigoo sidaa leh, misna ujeedada cunaqabatayntu weligood ma ahayn inay xanuujiso Jarmanka, kaas oo ah mid ka mid ah asxaabta iyo xulafadeenna dhow. Markaa, aad ayay noo dhibtay arrintani,” ayuu Wilkinson u sheegay warbaahinta.
“Waxaan la hadlaynaa Jarmanka, anagoo isku dayayna inaan helno waddo aanu wax uga qaban karno socodka gaaska. Waxaa laga yaabaa inay jiraan doorashooyin kala duwan oo aan eegi karno,” ayuu yiri, isagoo raaciyey in Ottawa ay kala xaajoonayso Berlin siyaabaha lagu soo celinayo qalabkan.
Saad-qaybiyaha tamarta ee Ruushka ee Gazprom ayaa sheegtay in lagu khasbay inay 60% hoos u dhigto gaaska dabiiciga ah ee u socda Jarmanka ee la sii mariyo dhuumaha Nord Stream usbuucii hore, sababtoo ah marawaxadaha Siemens ee Gazprom ee saldhigga Portovaya ee Vyborg gaaska ka bumbayn jirey ayaa ku xayiran Montreal, halkaas oo loo diray si dayactir loogu sameeyo.
Previous article”Haddii la leeyahay dadka yaan loo adeegin halla caddeeyo” – CCW oo ka jawaabey su’aalo badan oo loo qabo ( Daawo)
Next articleImaaraadka Carabta oo si u hagraday Somalia (Bal arag tillaabadan uu qaadayo & qodob aan laga hadlin)